प्रजातन्त्रलाई - कालो झण्डा
प्रजातन्त्रलाई - कालो झण्डा धरानमा नारा लाग्याे - दिल्ली सम्झौता धोका हो !, राजा त्रिभूवन मूर्दावाद !!
आश्विन १७, २०७७
७२७ पटक पढिएको
नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टिहरु समेत सबै राजनितिक दलका नेताहरु क्षिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा भेला भए । उनिहरु बिच आङ्खना मुलुकको आन्तरीक राजनिति बारे विस्तृत छलफल भई २०६२ साल मंसिर ७ गतेका दिन बाह्र बुँदे सम्झौता भयो । त्यसकै आधारमा नेपालमा अशान्ति र आन्दोलन सुरु गरियो । यस्तो आन्दोलनले जनजिवन अस्तव्यस्त, अशान्त र अराजकताको वातावरण सृजना भयो ।
यस्तो परिस्थितिको निदानकालागी संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने टुङ्गो लाग्यो । समयमा निर्वाचन पनि सम्पत्र भयो । संविधान सभाका ६०१ जना सभासद्हरुले लामो समय लगाएर धेरै वर्षपछि आखीरमा “३ राजनितिक दल बिचको सम्झौताको दस्तावेज” भनि २०७२ साल आश्विन ३ गतेका दिन राष्ट्रपति रामवरण यादवबाट गणतान्त्रिक नेपालको संविधान भनि घोषणा गरियो । त्यसैलाई नेपाली जनताका निम्त्ति संविधान भनि हात–हातमा थमाइयो । त्यहि संविधानका आधारमा संसद्को निर्वाचन भयो । निर्वाचन पछि २०७४ साल फाल्गुण ३ गतेका दिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टिका अध्यक्ष खड्ग प्रसाद ओली प्रधानमन्त्री भए । आज हाम्रो मूलुकमा अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टिको सरकार छ, सरकार शसक्त छ । शसक्त सरकार भत्रे कुरामा कुनै शंका छैन ।
सरकार आज के दिइरहेछ देशलाई ? जनता के पाइरहेछन् सरकारबाट ? के गरिरहेको छ सरकार ? जनता के देखिरहेका छन् ? सरकार के भनिरहेछ ? देशवासी के बुझीरहेका छन् र आज के भोगी रहेका छन् ? यी र यस्तै कुराहरु सबै नेपाली जनताका मन मनमा आङ्खनै प्रकारले खेलीरहेका छन् । म पनि आङ्खनो मनमा यस्तै केहि प्रश्नहरु उठाइरहेको छु । आफुले सानैदेखी सुनेका, जानेका र भोगेका कुराहरु सम्झिरहेको छु। कोट्याइरहेको छु, हजुरआमाले गुजुल्टीएको तोरीको साग नाङ्ग्लामा केलाए झैं आज म त्यसै त्यसै घोत्लीरहेको छु्.................
उहीले पहिलेको कुरा हो, नेपालमा राजतन्त्रात्मक व्यवस्था थियो । सिंहासनमा श्री ५ त्रिभूवन आशीन थिए, उनि आकासमा उडे वायुपंखी चील उडे झैं । बडो बेगले आकाश मार्ग हुँदैं उनि राजधानी काठमांडौबाट पूर्व तर्फ उडे । २००८ सालको कुरा हो, मंसिरको महिना, न्यानो घाम, बिहानीको समय, प्रातः कालीन शौच कार्य आदिबाट निवृत्त भई दैनिक पूजा, जप, तप, दान पूर्ण गरी बालभोग समेत ग्रहण गरी उनि उडे, २६ गतेको दिन । हवाई मार्ग हुँदै उनि विराटनगर तर्फ उडे । उनको शरिर चङ्गा थियो । उत्साह र जाँगर थपिएर अझ हलुका भएको थियो । त्यसै त्यसै आकाशमा उडिरहेको थियो ।
आङ्खना प्रपितामह श्री ५ राजेन्द्र विक्रम शाह वि.सं. १९०३ सालमा बन्धि बनाइएका थिए, पिंजडामा फसेका थिए र पसेका थिए । १०४ वर्षको लामो समयसम्मका तीन पुस्ताका चुचाले ठुङ्दा-ठुङ्दा बल्ल २००७ साल फाल्गुण ७ गतेका दिन त्यो पिंजडा फोरी श्री ५ त्रिभूवनबाहिर निस्केका थिए । त्यसैले आज उनि बढो हर्षित हुँदै आङ्खना दुवै पङ्खा फिजाई पहिलो पटक उपत्यका बाहिर निस्केका थिए । आङ्खनो देश दर्शन गर्न अगाडी सरेका थिए । उनका साथमा नेपाली कांग्रेसका नेता भद्रकाली मिश्र सवारी मन्त्री थिए ।
पाँच वर्षकै वाल्यावस्थामा नेपालको राजसिंहासनमा श्री ५ त्रिभूवन बसालिएका थिए । उनले श्री ३ चन्द्र सम्शेर, श्री ३ जुद्ध सम्शेर, श्री ३ भीम सम्शेर, श्री ३ पद्म सम्शेर र श्री ३ मोहन सम्शेरहरुको एक तन्त्रीय हुकुमी र जहानीया शासनको अनुभव गरेका थिए । उनिहरुको माया, मोह, स्नेह, सुसार, संरक्षण, शिक्षा, दीक्षा, अरोट, खरोट हुँदै झन पछि पछि त उनिहरुको चिप्ला व्यवहारसंग पनि साक्षात्कार गरेका थिए । पछि पछि त कयौं पटक डर, धाक, धम्कि समेतको अनुभव र यातना व्यहोर्दै त्यस्तो राप ताप बाट पेलीएर पिना पिना समेत भएका थिए ।
यस्ता दिन बिताउँदै आएका राजा श्री ५ त्रिभूवन २००७ साल पछि त नेपाल अधिराज्यका सार्वभौम सत्ता सम्पन्न शासक भए । राजकीय सत्ता एवं नेपाली सेनाको परमाधीपति पनि उनि नै भए । त्यसैले आज उनि निर्भिकताका साथ पाइला अगाडी बढाउँदै विराटनगर विमानस्थलमा ओर्लीए । त्यहाँ उनलाई स्वागत गर्न भेला भएका ठूलो जनसमुदायले “राष्ट्रनायक, प्रजावत्सल र प्रजातन्त्रवादि योद्धा” भनि जय जयकार गरे । विराटनगरमा उनका निमित्त आराम र भुजा ज्यूनार प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालाको निवासमा व्यवस्था भएको थियो । श्री ५ त्रिभूवनले २००८ साल मंसिर १ गतेका दिन नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष विराटनगर निवासी मातृका प्रसाद कोइरालालाई नेपाल अधिराज्यको प्रधामन्त्री पदमा नियुक्त गरेका थिए ।
विराटनगरमा हवाइजहाजबाट उत्रिएपछि श्री ५ त्रिभूवनको सवारी सिधै प्रधानमन्त्री निवास तर्फ लम्क्यो । सडकका दुवै तर्फ आङ्खना राजाको स्वागत तथा दर्शन गर्न लामवद्ध खडा भएका प्रजाजनहरुले जय जयकार गरेको आवाज सुन्दै दंग भएका थिए । उनलाई अझ आनन्द त त्यहा“ भयो जब जनसमुदायबाट निस्केको “जय नेपाल जय नेपाल जय नेपाल, जय प्रजातन्त्र, प्रजातन्त्र अमर रहोस” भत्रे नारा गुञ्जीरहेको थियो । नारा लगाउनेहरुले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सिंहासन नै बाझिमा राखेर विदेशीएका हाम्रा प्यारा राजा भत्रे शब्दहरु घन्काइरहेका थिए । आङ्खना पुर्खाले अर्ज्याको राजसिंहासन राणाहरुको एक तन्त्रीय निरङ्कुश जहानीया शासनबाट मुक्त गर्नलाई बाध्य भई दिल्ली संझौतागर्न परेको र त्यसलाई आधार बनाई आफु सो कार्यमा सफल भएकोमा उनको हृदय गद्–गद् भएको थियो ।
स्वागत द्वारबाट भित्र प्रवेश गरेपछि ठूलो आगनमा उनि पुगे । भित्र सजाइएका कुर्सी, मेच र अग्रभागमा चाहि आङ्खनालागी सजाइएको सुन्दर सिंहासनमा बस्नु भन्दा अघि त्यो घरका चारै तर्फ उनले आखा घुमाए । खावे घर, फुस/खरको छानो, वरीपरी बासको टाटीले घेरीएको उनले देखें । यहि रहेछ आङ्खना प्रधानमन्त्रीको निवास । यसो आखा बाहिर भित्र दौडाए उनले । कुनै उच्चस्तरको वैठक कोठा पनि छैन । यो त सामान्य नागरीकको घर मात्र हो । यता गाई, भैसी बाध्ने गोठ रहेछ । उता खसी बाख्राका निम्ति टाट्नो...... घोडाका लागी तवेला पनि । यस्तै रहेछ आङ्खना प्रधानमन्त्रीको घर व्यवहार । बासको बार भन्दा उतापटि अलि पर अग्ला अग्ला केराका बोटहरु, आप र लिचिका गाछीहरुपनि । यता फुलबारीमा फुलहरु फुलीरहेका । धुलै धुलो भएपनि बढारेर सुग्घर सफा पारेको आगन । दलान र आँटी रातो माटो र हरियो गोबरले लिपपोत गरेको । आङ्खना निमित्त सजावट गरेको सिंहासन जतिसुकै उच्चस्तरको भएपनि घरचा“हि बास्तवमा सामान्य नै रहेछ । राजा त्रिभूवन सिंहासनमा आसीन त भए तर उनि बडो गम्भीर र चिन्तामग्न देखीए........
राजधानीकाती राणाहरु पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुका दरबार र महलहरु कस्ता । बाग बगैचाहरु, त्यसको ताम झाम र झिलिमिलीमा चम्केका उनका आखाहरुले आज आफुले नियुक्ति गरेका प्रधानमन्त्रीको घर यस्तो रहेछ ! उनि छक्क परे । छेउमै दुवै हात जोडेर उभिरहेका प्रधानमन्त्रीलाई बडो भावुक हुदै सोधे राजाले “यहि हो तिम्रो घर ? ”
“सरकार १ सेवकको घर यहि हो । आज यो झुपडी पवित्र भएको छ सरकार !” उनि यसो निउरिदै दुवै हात जोडेर बिन्ती चढाइरहेका थिए ।
कार्यक्रम अनुसार भुजा तयार भयो । ज्यूनारको स्थानमा सवारी पुग्यो । राज हुने आसन अगाडी सजाइएका पानी पिउने सुनको बिट भएको चाँदीको गिलास विभित्र धातु जडित झारी । चाँदी कै थाल बोटुका र चम्चा कतै कतै सुनको झलक देखिने । सवै भाडा वर्तनहरुमा आखा घुमाए राजाले । यसो मुन्टो ठाडो पार्दै उनले सोधे “तिम्रो घर चाहि यस्तो, यी भाडा वर्तन के हो ? सिंहासन, गलैचा, टेबुल, कुर्सी र यो भुजाकोठाका यी सामानहरु चाहि कसरी यस्ता ?”
छेउमै दुवैहात जोडी ठिङ्ग उभिरहेका आङ्खना अनन्य मित्र जीमीन्दार विराटनगर निवासी चन्द्र प्रसाद नेपाललाई यसो अगाडी सर्न इसारा गरे प्रधानमन्त्रीले-“सरकार यी सबै सामाग्रीहरु विदेशबाट ल्याइएका हुन् । मात्तृका बाबुले सरकारको सवारी हुने मलाई जानकारी गराउनु भयो । अव स्वागत कसरी गर्ने के गर्ने भन्दै म संग सल्लाह भएको थियो । सरकारको सवारी हुने समाचारले सेवामा उत्साह जागृत भयो । म तुरुन्तै बनारस तर्फ लागें । त्यहाका काशी नरेस डा. विभूति नारायण सिंह हुनुहुन्छ । हाम्रो सम्बन्ध र सम्पर्क राम्रै छ । सरकारको विराटनगर सवारी हुनेकुरा जानकारी गराए“, उनि ज्यादै प्रसत्र भए हाम्रो दरवारका नजिकैका नातेदार पनि हुन उनि । हामी रैतिका पनि शुभचिन्तक छन् । मेरो अनुरोध सुन्दा उनि बडो खुसी भए । यी सबै सामाग्रीहरु गंगा पारी राम नगर उनकै दरबारवाट ल्याइएको हो सरकार । सरकारको स्वागत गर्न पायौं । हामी धन्य भएका छौं सरकार ।”
राजा त्रिभूवनको अनुहारमा हलुका हर्ष र अलि अलि विस्मत दुवै रंग झल्कीयो । प्रधानमन्त्री तर्फ अनुहार घुमाउदै यसो उनले सम्झीए । ती राजधानीका सडकहरु राणाहरुका ठूला ठूला दरवार र महलहरु उनका अगाडी झलझली झल्कीए ।“अनि यो घर तिमी कहिले बनाउछौं त ?”
प्रधानमन्त्रीको जवाफ नपर्खीकनै उनले तुरुन्तै हुकुम गरिदिए । “लौ छिट्टै राम्रो घर बनाउनु ।तीमीलाई घर बनाउन म अहिले नै एक लाख रुपैया दिन्छु ।”
प्रधानमन्त्रीले दुवै हात जोडी शिर निहुराई राजालाई तिन पटक दर्शन गरे । २००८ सालको एकलाख रुपैया भनेको आजको दिनमा कति मूल्य हुन्छ होला ?
भुजा ज्यूनार पछि, त्यहा स्वागत गर्न भेला भएको ठूलो जनसमुदाय संग आङ्खना दुवैहात जोड्दै बिदा माग्दै मुसुमुसु हाँस्दै लुरुलुरु अगाडी हिँडे राजा । बिदा हुने र दिने बिचको गाँठो दरो सँग बाधिसकेको रहेछ । स्वयंसेवक र सुरक्षाकर्मीहरुले निकै पसिना काड्नु पर्यो । बल्ल बल्ल माथी आदर्श विद्यालयको ठूलो चौरीबाट बिदा भएपछि मात्रै उनको सवारी धरान तर्फ चल्न सक्यो ।
त्यसबेला कालोपत्रे सडक त थिएन । धुलो, खाल्डा खुल्डी, अल्गो होचो हुनसक्ने सम्म सुव्यवस्था मिलाउन त खोजेकै थियो होला ! तर राजा चढेको सवारी घरी यता त घरी उता हल्लीदै घच्याक र घुचुक हुँदै बल्ल बल्ल चारकोशे जंगल पार गर्याे । त्यसबेलाका छत्तीस मौजाका जिम्दार परिवारमा १९९२ सालमा जन्मनु भइ, पछि विद्यार्थी युवा अवस्थामा आफै किसान आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा रहि नेतृत्व गर्नुहुने हाल धरान-१ निवासी विश्वनाथ बास्तोला ज्यूको भनाइ अनुसार राजाको सवारी चन्द्रनगरको पुछारमा पुग्यो । धरानको पल्लो छेउ खोल्छा पारी बाट विजयपुर डाँडा तर्फ चढ्यो । सरस्वती मन्दिर तुर्केधारो हुँदै माथी सरस्वती कुण्डलाई दाहिने पारी भगवान पिण्डेश्वर बाबाको मन्दिर तर्फ दुवैहात जोडी राजाले दर्शन गरे । त्यहाँबाट सिधै पूर्व गणेश मन्दिरको ठूलो चौरीमा उत्तर तर्फ रहेको साप्तीङ टाहारमा सवारी पुग्यो । त्यहिँ श्री ५ त्रिभूवनको सवारी क्याम्प (विश्रामस्थल) बनाइएको थियो । त्यसबेला सूर्यनारायण अस्ताचल तर्फ धिमागतिले चलिरहेका थिए ।
त्यहाँ चौरीको विशाल फाँटमा ठूलो उत्साह र जाँगरले श्री ५ त्रिभूवन आफुलाई गरेको स्वागत सत्कार स्विकार गरिरहेका थिए । चारै तर्फ विभिन्न प्रकारका स्वागत द्वारहरु बनाइएका थिए । विभिन्न संघ संस्थाहरुले आफ्ना राजाको स्वागतमा स्वागतका नाराहरु लेखेर जता ततै टाँगेका थिए । राता कपडा र केराका थामहरुले स्वागत द्वारहरु सिँगारिएका थिए । महिला, पुरुष, विद्यार्थी , युवक, साहू, माजन, व्यापारी लगायत साधू सन्त, महन्त, विद्वान् गुरुहरु र विभिन्न समूदायका आ-आफ्ना सांस्कृतिक एवं जातीय भेषभुषा तथा बाजागाजाका साथ जनमानसहरुले आफ्ना राजाको स्वागतका भजनका गानहरु पनि गाइरहेका थिए, भनौ“ त्यो स्वागत स्थल देवलोकमय आनन्दित भएको थियो किन नहोस् आज यस स्थलमा पहिलोपटक साक्षात् विष्णुका अंश नरेशको सवारी भएको थियो । राजाको दर्शन पाएर सबै साक्षात् विष्णुको दर्शन पाए “ मन्त्रमुग्ध भएर जयजयकारको नारा सहित फुल माला, लाजा, अभिर आदिबाट यथायोग्य स्वागत सत्कार गरिरहेका थिए । उनिहरुले सकेजति हृदय खोलेर आफ्ना राजाको स्वागत गरेका थिए । यता स्वागत गर्न भेला भएको विशाल जनसमुदायको भिडबाट ठूलो उत्तेजनात्मक र कर्कश आवाज पनि उडीरहेको थियो । त्यहा“ उत्साहको लहर र विरोधको कर्कश वातावरण बिच नमीठो युद्ध चलिरहेको अनुभव भइरहेको थियो ।
२००८ साल मंसिर २७ गते बुधवारका दिन शुभमुहूर्तमा श्री ५ त्रिभूवनका बाहुलीबाट पिण्डेश्वर संस्कृत विद्यालय स्थापनाका लागी शिलान्यास हुने कार्यक्रम तयार भएको थियो । कार्यक्रम भव्यताका साथ सम्पत्र गर्न त्यसबेलाका विद्वान्, बुद्धिजीवी एवं समाजसेविहरु बडो उत्साहका साथ सक्रिय भइरहेका थिए । कार्यक्रममा अग्रसरता लिनेहरुबारे १९९४ सालमा जन्मनु भएका विद्वान्, बुद्धिजीवि एवं ऐतिहासिक व्यक्तित्व धरान विजयपुर निवासी श्रीकृष्ण कोईराला ज्यूका अनुसार सर्वप्रथम त पं. छविलाल पोखरेल त भैहाल्नु भयो, पं. मेघराज शर्मा, पं. दीननाथ पौडेल, लक्ष्मी प्रसाद कोइराला, अविनारायण उपाध्याय, पं. गंगाधर पोखरेल, डि. भागवत प्रसाद खनाल, लक्ष्मी प्रसाद श्रेष्ठ, पं. भवनाथ मिश्र, पं. भोग्य प्रसाद भण्डारी, पदमलाल गीरी, पं. ध्रुवलाल पोखरेल, पं. शालीग्राम पोखरेल, काली प्रसाद श्रेष्ठ समेत धेरै महानुभावहरु हुनुन्थ्यो । यस कार्यलाई सुव्यवस्था मिलाउन मोरङ जिल्लाका त्यसबेलाका बडा हाकीम भुपालमान सिंह कार्की प्रष्टसंग देखापरेका थिए ।
स्वागत गर्नेहरको उत्साहवर्दक ठूलो जनसटमुदाय माझ उत्तेजनात्मक र कर्कश आवाजले पनि मौका छोपीरहेको थियो । सेना र सुरक्षा बलको व्यवस्था त सरकारले राम्रैसंग गरेको थियो होला तर राजा त्रिभूवनले भने आङ्खना प्रजाहरुको बिचमा जस्तो सुकै भिड भाड भएपनि पस्न र धुलमिल हुन आफ्ना प्यारा प्रजाहरुमाथि नै पूर्ण विश्वास सुम्पेको देखिन्थ्यो ।
यस्तो राजा र प्रजाको मिलन, भेटघाट, स्वागत सत्कार र हर्षोल्लासपूर्ण वातावरणमा उत्तेजनात्मक र कर्कश आवाज पनि शक्तिशाली हुदै गरेको आभास भयो । त्यहा यस्तो पनि सुनियो “दिल्ली सम्झौता धोका हो ! दिल्ली सम्झौता धोका हो !! दिल्ली सम्झौता धोका हो !!!” फेरी सुनियो “राजा त्रिभूवन मूर्दावाद ! राजा त्रिभूवन मूर्दावाद !! राजा त्रिभूवन मूर्दावाद !!!” आवाज अझ ठूलो भयो । सबैले आवाज आए तर्फ आफ्ना आँखा पुर्याए । बाँसको अग्लो डन्डीमा कालो कपडा हल्लीरहेको थियो । त्यस्ता काला कपडाहरु धेरै धेरै हल्लिरहेका थिए । आवाज झन ठूलो सुनियो । राजा त्रिभूवनले पनि सुने कालो झण्डा देखेपनि । प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइराला, सवारी मन्त्री नेपाली कांग्रेसका नेता भद्रकाली मिश्र र बडा हाकीम भूपालमान सिंह कार्की सम्पूर्णले आवाज सुने र ती काला कपडाहरुपनि प्रष्टै देखे ।
त्यसरी कालो झण्डा देखाउँदै राजा त्रिभूवनका विरुद्धमा नारा लगाउनेहरुमा को को थिए होलान् भत्रे कुराले मलाई झस्का दिइरहन्थ्यो, बुझ्ने प्रयत्न पनि गर्थे । त्यसबेलाका युवा किसान नेता वि.सं.१९९२ सालमा जन्मनु भएका अहिलेका बरिष्ठ अधिवक्ता ८५ वर्षीय धरान १ निवासी ज्येष्ठ नागरीक विश्वनाथ बास्तोला ज्यूका अनुसार सर्वप्रथम त युवा राजनितिक कार्यकर्ता राजनारायण सिंह थापा नै हुनुहुन्थ्यो । अनि महेन्द्र मोहन श्रेष्ठ, विष्णु कुमार हमाल वि.के.टि., सतिस चन्द्र गिरी, भोजराज पोखरेल, आफै विश्वनाथ बास्तोला पनि, ईश्वर मान विश्वकर्मा, राम चा, गोपाल श्रेष्ठ, महेन्द्र श्रेष्ठ, गोपाल नरसिंह प्रधान, यज्ञ प्रसाद आचार्य, विष्णु प्रसाद पराजुली, टि.आर. विश्वकर्मा, निर्मल गिरी, उमालाल विश्वकर्मा, चिनियादेवी श्रेष्ठ, जदुवीर विश्वकर्मा, केदारनाथ खनाल, दिव्यराज आचार्य समेत थुप्रै थुप्रै नेता कार्यकर्ता र समर्थकहरु कालो झण्डा हातमा लिएर कराईरहेका थिए ।
यसरी कर्कश र उत्तेजनात्मक आवाज आएको तर्फ हात तेर्स्याउदै सवारी मन्त्री प्रजातन्त्रवादी कांग्रेसका नेता भद्रकाली मिश्रले हौसीदै सेना र सुरक्षा बललाई आदेश दिए,“ठोक् ठोक् । यो कालो झण्डा देखाउनेहरुलाई, यी गुण्डाहरुलाई ठोक् । के टुलुटुलु हेरीरहेका छौं, यी उग्रवादीहरुलाई पक्रेर पाता कस ।” विद्रोहीको आवाज झन ठूलो सुनियो । “नेपाल कम्युष्ट पार्टि जिन्दावाद” उनले झन कडा आदेश दिए । “ठोक् गोली ठोक्, के हेरीरहेका छौ मेरो आदेश भो ठोक् गोली” परिस्थिति भयावह भयो । यहाँ ठूलो दुर्घटना र घरघोर युद्ध नै हुने भयो ।
आफ्नै अगाडी, आफैले देख्ने गरेर, आफैलाई कालो झण्डा देखाउदै, आफैलाई मुर्दावाद भन्दै, कराईरहेका, आफ्नै प्रजाहरुलाई-आफैले नियुक्ति गरेका, आफ्नै सवारी मन्त्री भन्द्रकाली मिश्रले, आफ्नै सेनालाई, आफैले देख्ने र सुत्रे गरी, गोली ठोक्ने आदेश, दिएको देख्दा र सुन्दा, राजा त्रिभूवन आफू बडो मर्माहित बने । अव यहाँ जस्तोसुकै घटना पनि घट्न सक्छ । कांग्रेस र कम्युनिष्ट जो सुकै मरेपनि वा घायल भएपनि आखिर आफ्नै प्रजाको आघात हुने हो । यस्तो बिभत्स घट्ना घट्नु हुँदैन भन्दै आफ्ना दुवै हात आकाश तिर उठाउँदै दुवै पञ्जा हल्लाउँदै ठूलो जन समुदायको माँझमा उभिएर सारो सारो कराउँदै ठूलो स्वरले हुकुम गरे हुँदैन हुदैन हुदैन । गोली ठोक्न हुदैन । यिनीहरुलाई पक्रन पनि पाइदैन । यिनीहरु सबै हाम्रै प्रजा हुन् । यिनीहरुका कुरापनि हामीहरुले सुत्रुपर्छ । बोलाउ बोलाउ । यिनीहरुलाई सम्झाई बुझाई बोलाउ । यिनीहरु के भत्र चाहन्छन्रु म यिनीहरुको कुरा ध्यानपूर्वक सुत्र तयार छु । लौ छिट्टै बोलाउ............................” ।
सिङ्गै महाकाली हाम्रो हो
मेरो स्मृतिमा : भोला कमरेड
आज टिकाको दोस्रो दिन, पापाङ्कु .....
आज टिकाको दोस्रो दिन, पापाङ्कुशा एक ...